सरकारी गाडी दुरुपयोग–४ : हृदयेशको सबैभन्दा महँगो, ब्राण्डमा प्रदीप ज्ञवाली अगाडि
सरकारी गाडी दुरुपयोग–४ : हृदयेशको सबैभन्दा महँगो, ब्राण्डमा प्रदीप ज्ञवाली अगाडि अधिकांश मन्त्रीको सुविधाको गाडी नियमानुसार छैन, कुन मन्त्री कुन गाडी चढ्छन्?
शिव बोहरा आइतबार, जेठ ४, २०७७, ११:३१
काठमाडौं- नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई सरकारले सुविधामा दिन गाडीको निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। तर कुनै मन्त्रीले पनि तोकिएको मापदण्डअनुसारका गाडी चढ्दैनन्। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा नेपाल सरकारका विशिष्ट कर्मचारीका लागि दिइने गाडी सुविधाको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
दिग्दर्शनको शीर्षक ३११२१ मा सवारी साधनको बारेमा उल्लेख छ। उक्त शीर्षकको ‘क’मा नयाँ सवारीअन्तर्गत संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र मन्त्रीका लागि १६ सयभन्दा माथि २ हजार सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी तथा संवैधानिक निकायका सदस्यहरुका १३ सयदेखि १६ सय सिसीसम्मका गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर तोकिएको मापदण्डअनुसार गाडी सुविधा लिने न त मन्त्री नै छन् न त सचिव नै। नेपाल लाइभले कुन मन्त्रीले कुन गाडी सुविधामा प्रयोग गर्दै आएका छन् भन्ने खोज्ने प्रयास गरेको छ। मन्त्रीले पाउने सवारी सुविधामा १६ सयदेखि २ हजार सिसीसम्म इन्जिन क्षमताका पेट्रोलबाट चल्ने फुल अप्सन गाडी हुन्। तर सबै मन्त्रीले चढेका गाडी मापदण्डभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका डिजेल गाडी छन्।
संवैधानिक निकायका सदस्य/विशिष्ट श्रेणीका लागि १३ सयदेखि १६ सय सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी दिइने व्यवस्था छ। सरकारका सचिव, मुख्यसचिवले १३ सयदेखि १६ सय सिसीसम्म इन्जिन क्षमताका फुल अप्सन पेट्रोल गाडी चढ्न पाउने हो। तर, सचिवले मन्त्रीलेभन्दा सुविधायुक्त गाडी समेत चढ्दै आएका छन्। सचिव तथा सहसचिवले पनि फोर्डको इन्डेभर, कियाको स्पोर्टेजदेखि ल्यान्ड क्रुजर प्राडोसम्म छन्।
ब्रान्डमा परराष्ट्रमन्त्री, मूल्यमा संघीय मामला र रक्षामन्त्री
ब्रान्ड भ्यालुका हिसाबले मन्त्रीहरुले चढ्ने गाडीमा सबैभन्दा ब्रान्डेड गाडी मर्सिडिज बेन्जको हो। मर्सिडिज बेन्जको गाडी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चढ्दै आएका छन्। नियमित रुपमा उनले चढ्ने मर्सिडिजको एसक्लास सेडान कार हो भने त्यसको विकल्पको रुपमा मर्सिडिजकै एसयुभी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
त्यसैगरी हालको बजार मूल्यका हिसाबमा सबैभन्दा महँगो गाडी चढ्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र रक्षामन्त्री पर्छन्। सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले टोयोटाको ल्यान्ड क्रुजर चढ्छन्। हाल यसको बजार मूल्य ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ भने यो गाडी ४ हजार ४ सय ६१ सिसी इन्जिन क्षमताको हो।
अन्य अधिकांश मन्त्रीहरुले टोयोटाकै ल्यान्ड क्रुजर प्राडो चढ्दै आएका छन्। उक्त गाडीको नेपाली बजार मूल्य २ करोड ५७ लाखदेखि ३ करोड २४ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। यो गाडी २९ सय ८३ इन्जिन क्षमताको हो। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मित्सुबिसीको पजेरो चढ्दै आएका छन् भने शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेल पनि मित्सुबिसीकै पजेरो स्पोर्टस्मा सयर गर्छन्।
सहरी विकास मन्त्रीका लागि राखिएको गाडी राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले चढ्दै आएका छन्। उनले फोर्डको इन्डेभर चढ्दै आएका छन् भने खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पनि सोही मोडलको गाडी चढ्छिन्। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले टोयोटाको र्‍याभ फोर गाडी चढ्ने गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षामान पुनले फोर्ड इन्डेभर र बिवाइडीको इलेक्ट्रिक गाडी चढ्दै आएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले टोयोटा फर्चुनर र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले महिन्द्रा स्कर्पियो चढ्ने गरेका छन्।
अपवादमा श्रम र खेलकुदमन्त्री
अधिकांश मन्त्रीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी इन्जिन क्षमता र विलासी गाडी चढ्दै आएका छन्। तर उक्त सूचीको अपवादको रुपमा रहेका छन् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादव र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन्। श्रममन्त्रीले सुविधामा पाएको महिन्द्रा स्कर्पियो १९ सय ९९ देखि २२ सय सिसीसम्म इन्जिन क्षमताको गाडी हो भने यसको नेपाली बजार मूल्य ४८ लाख ८५ हजारदेखि ७१ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ।
त्यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले टाटाको सफारी स्ट्रोम चढ्दै आएका छन्। यो गाडी २१ सय ७९ सिसी इन्जिन क्षमताको हो भने यसको मूल्य ६७ लाख ९९ हजार र ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पर्छ।
श्रममन्त्रीको पनि वैकप्लिक गाडी सफारी स्ट्रोम नै रहेको छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले मन्त्रीहरुमध्ये श्रम र खेलकुद मन्त्रीले मात्र तुलनात्मक रुपमा सस्तो गाडी प्रयोग गरेका छन्।
कसको कस्तो गाडी?
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको मर्सिडिज बेन्ज।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको फोर्ड इन्डेभर।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा – टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर प्राडो
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर प्राडो।
ऊर्जमन्त्री पुनको दोस्रो गाडी बिवाइडी।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको ल्यान्डक्रुजर प्राडो।
श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको स्कर्पियो
खानेपानी मन्त्री बीना मगरको फोर्ड इन्डेभर।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको मित्सुबिसी पजेरो स्पोर्ट्स।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल– ल्यान्ड क्रुजर प्राडो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी – टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर
शक्तिबहादुर बस्नेत – हुन्डाई कोना इलेक्ट्रिक
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे – टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर प्राडो
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट– टोयोटा र्‍याभ फोर
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मित्सुबिसी पजेरो।
सञ्चारमन्त्रीले चढ्ने ल्याण्डक्रुजर प्राडो
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको ल्याण्डक्रजर प्राडो
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई – टोयोटा फर्चुनर